बुबा पनि एक आमा - Kamana News
यी सुन्दरी हुन ५० बर्ष पार गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी हुनेवाली जीवनसंगिनी !
भारतले लगायो पाम आयलमा प्रतिबन्ध
सोमवार, पौष १३ २०७७
बुबा पनि एक आमा
एकदिन एकजना आफन्तलाई भेट्न राजधानीको एक अस्पताल पुगेकी थिए । आफ्नतलाई भेटेर फकिर्दा त्यस अस्पतालको गेटमा केही मानिसहरु जम्मा भएका थिए । उनीहरु आवेगमा थिए । मैलै अलि नजिक गएर हेरे र एक जना मान्छेसंग सोधे उनीहरु किन यस्तो गरिरहेका छन् भनी ? उनको जवाफ थियो यस अस्पतालको लापर्वाहीले गर्दा सुत्केरीका ज्यान गयो । त्यहाँ पुलिसहरु पनि अनुसन्धानका लागी आए । म त्यहाँबाट हिडेँ ।
यस घटनाले मेरो मनमा एक अनौठो किसिमको विचार आयो । त्यो विचार पु्रुषको परिवर्तित भूमिका प्रति । पुरुषले प्राकृतिक रुपमा आमा नबन्न सकेता पनि अरु रुपमा एक आमाको भूमिका पक्कै निर्वाह गर्न सक्छ । महिला र पुरुषमा प्रकृतिले नै फरक पारेता पनि भावना र स्वभाबमा भने बदलाउ लयान सकिन्छ । आमाको जस्तो माया र स्नेह प्रदान गर्न सक्छ् ।
ममताको खानी आमा र पे्ररणाको खानी बाबुलाई भनिन्छ । सधैँ यो भनाई सबैमा लागु नहुन सक्छ । हाम्रो समाजमा प्रायःपुरुषले वाहिरको काम गर्छन् भने महिलाले घरव्यवहारको काममा बढी व्यस्त भएको देखिन्छ । यो रुपले चलेको समाज अहिले परिवर्तन हुदैँ गएको छ । महिलाको जीवनमा शिक्षाले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । अहिले महिला पनि बाहिरिय कार्यहरुमा पुरुष जति नै काममा संलग्न तथा सहभागी हुने गर्छन् । बाबुआमाको समय वालवालिकाका लागी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यस्त जीवनशैली र कामको चापले बच्चाको ख्याल राख्न समयको अभाब हुने गरेको देखिन्छ । विशेष गरी एकल परिवारमा जहाँ श्रीमान् श्रीमतिको जागिर हुन्छ, घरको काममा समय दिन गार्हो हुने गरेको हुन्छ ।
आमाले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई सबैभन्दा राम्ररी बुझछिन् । तर पुरुषले पनि त्यति नै बुझन् सक्छन् । अहिलेको समाजमा पुरुषले पनि महिलाको भूमिका केही हदसम्म निर्वाह गर्ने गरेको पाईन्छ । आफ्नो छोराछोरीको तथा घरको भूमिकाप्रति उतिकै महत्व हुने गर्छ । तसर्थःबाबु पनि एक आमा हो ।
सोमवार, पौष १३ २०७७१०:२३:०३
अनर्थ हुन सक्छ।
किसानको जीवन गाथा